Izinto ezili-15 zeWebhusayithi eFanelekileyo ” Martech Zone
Izinto ezili-15 zeWebhusayithi eziSebenzayo
NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2016 NgoLwesibini, Januwari 19, 2016 Douglas Karr
Elinye icebiso alinasiphelo, kwaye ndiyakholelwa ukuba olu luhlu luza kuvela Quicksprout ngomnye wabo. Abathengisi bahlala bexakekile kwimveliso yokuqulathiweyo kunye nokuvavanywa kangangokuba bahlala bephoswa zizinto ezisisiseko eziyimfuneko kwimpumelelo.
Le infographic yalatha kwizinto ezili-10 eziyimfuneko ekuzibandakanyeni kwabafundi, ukwenziwa kweinjini yokukhangela kunye nokwabelana ngokwasentlalweni:
ukufaneleka -Uphando, ubhale kwaye uyile umxholo wokwazisa ngokupheleleyo abasebenzisi kunokuba uzame ukudlala kwiinjini zokukhangela.
Umxholo ubude -Thabatha ixesha lokuvelisa amanqaku amade, agqityiweyo ngesihloko kunokuba uqokelele amanqaku amafutshane.
Media Sebenzisa imifanekiso nevidiyo kwinqaku ngalinye ukucacisa umxholo. Nokuba ukukhetha umfanekiso ofanelekileyo kunokunyusa inkumbulo kunye nokuqonda ngesihloko. I-infographics kunye neevidiyo ezichazayo zinokunika isisombululo esipheleleyo.
Igrama kunye nopelo -Igama elibi, upelo kunye neempazamo zegrama zinokonakalisa umbono wokuqala kunye neendwendwe. Ukubhalisela Igrama kufanelekile kutyalo-mali!
Ukufunda -Kuphephe ukuthetha ngentengiso kwaye unxibelelane ngokufanelekileyo. Umxholo odidekileyo okanye ontsonkothileyo unokuqhuba abathengi abaninzi babe kude.
Ukufometha -Ubeko lwezithuba zakho, ukusetyenziswa komfanekiso, ubuchwephesha, indawo emhlophe, ubugorha, ugxininiso, amagama aphambili kunye nezihlokwana konke kuphucula ubuchule babafundi bokuskena nokugcina umxholo wakho.
U bungcali -Ukwakha ubukho bakho kwi-Intanethi kunye negunya kwishishini lakho kubaluleke kakhulu ekwakheni ukuthembela ekugqibeleni okushukumisela abafundi kubathengi.
Izabelo zeNtlalo -Izibalo sisalathiso sokuthandwa kunye negunya, ke ukusebenzisa amaqhosha okwabelana ngokwasentlalweni kunye nokubonisa ukubalwa kweembono kunye nezabelo kunokuqhuba ngokwabelana kunye nokuguqula.
Links -Ukuphepha amakhonkco aphumileyo anciphisa amandla akho okubonelela ngokuchanekileyo komxholo wakho. Ukuphepha amakhonkco angaphakathi kuthintela ukubanakho komfundi wokuntywila nzulu kwisihloko. Zombini ziyasebenza kwaye kuya kufuneka uqinisekise ukuba iphepha ngalinye linazo.
izimvo Ngelixa iincoko ziye zafudukela kwiindawo zentlalo, umgangatho wezimvo zakho usabalulekile, njengoko kunjalo nexesha lakho lokuphendula. Bandakanya onke amagqabantshintshi kwaye unike ingxelo ngayo nayiphi na i-spammers
Izinto ezimbini ezongezelelweyo
Andiqinisekanga ukuba kutheni kushiyeke ngaphandle, kodwa ndicinga ukuba kukho izinto ezintlanu ezongezelelekileyo, ezibaluleke kakhulu ezingekhoyo kolu luhlu!
Imirhumo -Ukubonelela ngeendlela zokundwendwela kwi-imeyile, kwincwadana yeendaba okanye kwizaziso zesikhangeli kuphela ezinokubonelela ngeendlela zokukhulisa iindwendwe kwaye uzigcine zibuya.
Iifowuni zokuSebenza -Ufuna ukuba benze ntoni abatyeleli kwindawo yakho? Ukunikezela kunye nokuvavanya iindlela ezahlukeneyo zokutsalela inyathelo kubalulekile ukuba ushiye umzila ukuze iindwendwe zibandakanye uphawu lwakho okanye zithenge iimveliso okanye iinkonzo zakho.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano -Ukwazi kweendwendwe ukufowunela, ukuxoxa okanye ukushiya umyalezo kunyanzelekile. Eyona nto ingcono ziimephu kunye nezikhombisi, cofa-ukuya-umnxeba amaqhosha, kunye nezisombululo zengxoxo ezibekiweyo.
ukufuna Amaxesha amaninzi, iindwendwe zifikelela kwindawo yakho kodwa zingayifumani eyona nto ziyifunayo. Ukubonelela ngenkqubo yokukhangela yangaphakathi efanelekileyo kungabenza bangangxami.
noluphendulayo -Ngaba indawo yakho ilungiselelwe ubuninzi bezixhobo kunye nokubukela ubungakanani kwintengiso? Iwebhusayithi ephendulayo iyimfuneko kule mihla, kwaye inokuchaphazela nezikhundla zakho zokukhangela ezihambayo.
tags: Igunyaubiza isenzoizimvoiphepha lokunxibelelanaubude bomxholoUkuThengiswa kweMpahlaIzintoamakhonkco angaphandleamakhonkco angaphakathiuphando lwangaphakathiubude bomxholonewsletterukufomatha iphephaiwebhusayithi esemgangathweniquicksproutukubalulekaiiwebhusayithi eziphendulayoukubhaliswatypographyIzinto zephepha lewebhuwebsite
Intengiso yeendaba zeNtlalo kunye noShishino oluNcinci
Ngubani ophethe i-Teleprospectpecting?
iindidi Khetha Udidi Adtech Uhlalutyo novavanyo UkuThengiswa kweMpahla Iinkcukacha Uqoqosho kunye noRhwebo email Marketing Itekhnoloji eKhanyayo Ukuthengisa umsitho Ukuthengisa kunye neeVidiyo zokuThengisa Iincwadi Zentengiso Imicimbi yentengiso Amanani entengiso Izixhobo Zokuthengisa Uqeqesho lweNtengiso UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethi Eyobudlelwane boluntu Ukunika amandla ukuthengisa Uphando lwezoPhando Social Media Marketing
Besisenza iividiyo zikaFacebook eziBukhoma kumthengi wethu sisebenzisa iSwitcher Studio kwaye sithanda ngokupheleleyo iqonga lokusasaza ividiyo ...